ကြားသိရသမျှ Archives - ThutaStar
ကလေးနို့တိုကျနသေော မိခငျပျေါကို ခေါငျမိုးပျေါမှ မွှဟေောကျတဈကောငျ ကလြာပွီး လကျကိုကိုကျမိသှားရာ….
Unicode အိမခြေါငမြိုးပေါကြမှပှေုတကြွ ကလေးနို့တိုကနြသေော မိခငပြေါကြို မှဟေောကတြစကြောငြ ကလွာပှီး နို့တိုကနြသေော မိခငလြကကြိုကိုကမြိ ခဲ့ပါတယြ…။ သံတှဲမှို့နယြ မောရြှညကြွေးရှာနေ ဒေါအြညိုသညြ နအေိမတြှငြ ကလေးနို့တိုကနြစဉြေ 1-10-2019 1:30အခွိနတြှငြ…. ခေါငမြိုးပေါမြှ မှဟေောကတြစကြောငြ ကလွာပှီး လကကြိုကိုကမြိသှားရာ….. ကှငြးဝိုငြးတိုကနြယဆြေးရုံမှ တဆငြ့ သံတှဲဆေးရုံသို့ အရေးပြေါ ဆကလြကပြို့ဆောငြ […]
ဝန်းရံသူတွေ အရမ်းကို များနေတဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်က ကြက်သားသည်မလေး
October 2, 2019 Thuta Star 0
မကြာခင်ကပဲ လူမှုကွန်ယက်မှာ ပုရိသ ပရိသတ်တွေကြား ကြက်သားသည် မလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရေပန်း စားလို့ နေပါတယ်… သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ ထွေးမွန် လို့ သိရပီး Photo မော်ဒယ် တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်းရံမှု များပြားနေတဲ့ ကြက်သားသည် မလေး ထွေးမွန် ကတော့ […]
အန္တာရာယ်​များလွန်းလှတဲ့ ကမ်​ပါးယံကို ကြိုးစားပမ်းစားကုတ်​ကပ်​သွားလာ​နေတာက ဝါးဥရှာ​နေတာမဟုတ်​ပါဘူး
စိတ်​မ​ကောင်းစရာ အဖြစ်​ပါဗျာ……. ကမ်းပါးယံမှာ ကုတ်​ကပ်​သွားလာ​နေတာက ဝါးဥရှာ​နေတာမဟုတ်​ပါဘူး …….. အခုလို ဆင်းရဲဒုက္ခ​ရောက်​ရတဲ့ဘဝက​နေ လွှတ်​​မြောက်​​အောင်​ ပညာတတ်​ကြီးဖြစ်​​အောင်​ အန္တာရာယ်​များလွန်းလှတဲ့ ကမ်​ပါးယံကို ကြိုးစားပမ်းစားသွား​နေရရှာတာပါ….. ဇူလိုင်​လက​နေ ပြင်​လိုက်​ပျက်​လိုက်​နဲ့ အခုထိဆိုး​နေတုန်းပါဘဲ……​ ကျောင်းသား/သူ​လေး​တွေ တကယ်​ကို ခက်​ခက်​ခဲခဲသွား​နေရတာပါ….. ချင်းပြည်​နယ်​ မင်းတပ်​မြို့က ရပ်​ဒုတ်​ရွာဖြစ်​ပါတယ်​….. Ng´pang Loung Harling( […]
ပြည့်တန်ဆာကို ရိုက်နှက် မိန်းဒိမ်းကျင့်ဘို့ကြိုးစားခဲ့သူ အဖမ်းခံရ (ရုပ်သံ)
ပြည့်တန်ဆာကို ရိုက်နှက် မိန်းဒိမ်းကျင့်ဘို့ကြိုးစားခဲ့သူ အဖမ်းခံရ (ရုပ်သံ) Oct.2,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီခရိုင် နောင်ပေါ်မြို့ မှာ နေထိုင်နေသူ နိုင်အိန် အသက် (၄၀ ) မည်သည့် နိုင်ငံသားဟု မဖော်ပြ- အမျိုးသားဟာ ညပိုင်း အတူအိပ်ဘို့ငွေးကြေးပေးခေါ်လာတဲ […]
ညဖကျ ဖုနျးအားသှငျးရငျး အိပျခဲ့သူတဈယောကျရဲ့ဖွဈရပျဆိုး
September 30, 2019 Thuta Star 0
ညဖက်ဆိုဖုန်းအားသွင်းပြီး အိပ်တတ်တဲ့ Apannpyay ပရိသတ်တွေ လုံးဝမပေါ့ဆကြရမယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းကို ပလပ်ခုံမှာအားသွင်းထားပြီး၊ အိပ်ပျော်သွားစဉ်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ပြီး၊ မသိမသာသေဆုံးသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်အမျိုးသား Suthee ဟာ ဖုန်းကို ခါတိုင်းလိုပဲ အားသွင်းပြီးတော့ ပလပ်ခုံမှာ တပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာဘေးမှာ အမြဲတမ်းထားအိပ်နေကြဖြစ်တဲ့ Suthee အတွက် […]
ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်သောအခါ….
ဒီညောင်ပင်ကြီးက တော်တော်လေး ထူးဆန်းတယ်။ ကဆုန်လ ရောက်ပြီဆိုရင် ရွက်နုဝေပြီး ညောင်ကန်တော့ ထိုးတယ်။ မနေ့က ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ အနီးအနားအိမ်တွေက ထွက်ကြည့်တော့ ညောင်ရွက်ကလေးတွေ ကန်တော့ထိုးနေတာ။ အရွက်ကလေးတွေ ထပ်ပြီး ကန်တော့ထိုးနေတဲ့ပုံက […]